Japon hanamorana ny fameperana fidirana ho an'ireo mpandeha vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Japon hanamorana ny fameperana fidirana ho an'ireo mpandeha vaksiny
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Taratasy fanamarihana fanaovana vaksiny miaraka amin'ny Pfizer sy BioNTech, Moderna ary AstraZeneca ihany no hekena avy amin'ireo vahiny tonga.
Japon mba handray mari-pankasitrahana vaksiny US, EU ary Japoney avy amin'ny mpitsidika.
Ny governemanta Japoney koa dia mihevitra ny fanalefahana ny famerana COVID-19 ao an-toerana.
Ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana sasany dia mampitandrina ny amin'ny loza ateraky ny fanajanonana ny famerana aloha loatra.
Nanambara ny manampahefan'ny governemanta Japoney fa mikasa ny hampiato ny fepetra takina amin'ny quarantine COVID-19 ho an'ireo miditra ny firenena izy ireo miaraka amin'ny taratasy fanamarinana manamafy ny fanaovana vaksiny feno amin'ny coronavirus hatramin'ny faran'ny volana septambra tamin'ity taona ity.
Raha ny tatitra voalohany, ny vanim-potoana quarantine aorian'ny fiampitana ny sisin-tany Japoney dia hahenaina hatramin'ny roa herinandro ka hatramin'ny 10 andro.
Taratasy fanamarihana vaksiny miaraka amin'i Pfizer ary BioNTech, Moderna ary AstraZeneca dia ekena amin'ny fahatongavan'ireo vahiny.
Ny mari-pankasitrahana momba ny vaksiny dia tsy maintsy avoaka any Etazonia, firenena EU na Japon koa, mba hekena.
Talohan'izay, ny minisiteran'ny fahasalamana japoney dia nampiato ny fampiasana doka 1.63 tapitrisa eo ho eo Vaksiny moderna avy amin'ny andiany telo novokarina tany Espana. Misy akora tsy fantatra hita tao amin'ny fanomanana.
Antenaina ihany koa ny governemanta hanapa-kevitra ny amin'ny fanitarana ny vonjy taitra COVID-19 amin'izao fotoana izao mihoatra ny datin'ny fetin'ny alahady hatramin'ny 30 septambra ho an'i Tokyo sy prefektiora 18 hafa, satria ny hopitaly dia mijanona eo ambany fangejana, hoy ny loharanom-baovao avy amin'ny antoko.
Amin'izao fotoana izao dia nangatahina ny olona mba tsy hiampita ny sisintanin'ny prefektiora, saingy azo atao izany fitsangatsanganana izany raha toa ka nahavita ny vaksinin'ny vaksininy ny olona na afaka mampiseho porofo amin'ny fitsapana COVID-19 ratsy, hoy ny loharanom-baovao miaraka amin'ny fahalalana ny drafitra.
Ny governemanta koa dia mikasa ny hanamaivana ny fetran'ny mpijery 5,000 amin'izao fotoana izao amin'ny hetsika lehibe raha toa ka mifanaraka ny fepetra takiana.
Ny trano fisakafoanana manara-penitra amin'ny fepetra fanoherana ny viriosy dia avela hanolotra alikaola, fa ny vondrona lehibe kokoa noho ny efatra kosa dia afaka miara-misakafo.
Ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana sasany dia naneho ny ahiahiny fa aloha loatra ny famelana ny olona hiverina amin'ny fiainany mahazatra satria mbola tsy voafehin'i Japon ny fihanaky ny viriosy.
"Mijery tsara ny toe-draharaham-pitsaboana ankehitriny izahay ary manapa-kevitra" amin'ny toe-javatra vonjy taitra, hoy ny praiminisitra Yoshihide Suga.